JAALALA HIYYEESSAA-Seenaa Waa Guddaan Irraa Baratamu!! – Beekan Guluma Erena
JAALALA HIYYEESSAA-Seenaa Waa Guddaan Irraa Baratamu!!	Beekan Guluma Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE May 13, 2016January 28, 2017OROMO, OROMOSTRUGLE
257SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
JAALALA HIYYEESSAA Vs Gaabbii Barabaraa!
Mucaa baay`ee hiyyeessa (harka qalleessa) ta`etu intala soorettii (qabaattuu) takka jaalate. Sababa hiyyeessa ta`eef sijaaladha jedhee gaafachuu sodaatee hedduu cinqamus, guyyaa tokko gaafachuuf murteesse. Gaafa inni bira deemee sijaaladha jedhuun isheen baay`ee ajaa`ibamte. Akkamitti si jaaladha naan jetta? miindaan ati ji`aatti argattu baajata koo isa guyyaa tokkooti. Kanaafuu, ani tasuma sijaalachuu hin danda`u, deemii nama sadarkaa keetii jaaladhu ittiin jette. Innis baay`ee gaddee biraa deeme. Haata`uu malee, ishee dagachuu hin dandeenye.
Waggaa 10 booda akkuma tasaa isaa dukkaana guddaa tokko keessa jiruu isheenis achiiti waa bitachuuf dhufte. Akkuma isa argiteen “akkami aboo, ammas hin fuunee jettee itti kofalte”. Ammas takka turtee abbaan manaa koo mindaa hangamii akka argatu beektaa? ji`atti qarshii 15,000 argata jetteen. Ammas inni nama baay`ee jabaa woyiiti ittiin jettee itti kofalte. Gaafa isheen kana jettu inni baay`ee gaddee ijji isaa imimaan keessa yaa`e.
Akkuma isheen kana haasoftee xumurteen abbaan manaa ishee dhufe. Kana booda nagaa hoo`aaf kabajaa gaafatee, haadha manaa koo argitee? ittiin jedhe. Ergasii akkuma isa biraa xinnoo deemeen isheedhaan inni abbaa pirojektii ani hojjadhuuti. Ani immoo gargaaraa isaati. Kan qarshii 15,000 ji`aatti naaf kafalu isa kana dha. Kan si ajaa`ibu hanga ammaa fuudhee hin jiru. Duri intalala takka jaalatee baay`ee qarshiitti amanti waan ta`eef walii galuu hin dandeenye jedheen. Nama baay`ee beekaaf arjaa woyiiti. Intala isa argatte rabbi eebbise ittiin jedhee seenaa isaa jalqabaa hanga dhumaa itti hime. Isheen baay`ee qaanoftee waan jettu wollaalte.
Qabeenyi waan dhufee darbaati, bara tokko hiyyoomtee, bar-biroo sooromta’ jechi namni siin jedhu bara baraan sammuu keessa jiraata!. Namni gaafa adunyaa tanatti dhufe harka qullaa ture, kanaaf qabeenyaan hin boonin… Dursiiti nama jaalalaa ta’uuf carraaqi. Nama fageessee yaadu, hojjetee jijjiiramuufi namummaa namaatti amanu malee nama horiirratti of gatu hinta’iin; Gaabbiifi eegeen booddee deemti jedhu mitiiree? –
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa257SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← OROMUMMAAN MAALI?…Ayyaanaa Dhufeeraatin’
LAAFAA MITI DURRI KEENYA -Caalaa Haahiluu Abaataa →